थाहा पाइराख्नुहोस् यस्तो छ सेक्स पार्टनरबाट चाहने यी १० कुराहरु - Everest Dainik - News from Nepal
थाहा पाइराख्नुहोस् यस्तो छ सेक्स पार्टनरबाट चाहने यी १० कुराहरु
हामी जसरी सक्रिय रुपमा सेक्स गछौँ, त्यसरी आफ्नो पार्टनरसँग यसको बारेमा कुरा गर्न हिचकिचाउँछौं । युनिभर्सिटि अफ केटक्की …. की यौन अनुसन्धानकर्ता क्रिष्टेन मार्कका अनुसार वास्तवमा यौन जोडीहरु यसको बारेमा कुरा गर्न नै चाहँदैनन् । जसको फलस्वरुप एउटै ओच्छ्यानमा सुत्ने दम्पत्तिलाई पनि आफ्नो पार्टनरले के चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुरा थाहा हुदैन ।
० यौन क्रिडामा पुरा ध्यान
ओच्छ्यानमा हुँदा महिलाहरु आफ्नो पार्टनरले पुरै ध्यान यौन सम्बन्धमै देओस् भन्ने चाहन्छन् । महिलाले आफूलाई ध्यान दिएको महसुस भए पुरुषको प्रेम बढी अनुभव गर्छन् । आँखाको हाउभाउ, मुखको क्रियाकलाप, चुम्बन, ओंठमा चुम्बन वा संवेदनशील अंगमा स्पर्ष यौन सम्पर्कको समयमा महिलालाई मन पर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
० पाक क्रिडा महत्वपूर्ण
महिलाहरु यौन सम्पर्क शुरु हुनु अघि गरिने क्रियाकलापमा बढि चाख राख्छन् । पाक क्रिडाको माध्यमबाट आफूलाई पुरै उत्तेजित तुल्याएपछि मात्र यौन सम्पर्क शुरु होस् भन्ने महिलाको चाहाना हुन्छ । अधिकांश महिलाले पुरुषहरु सेक्सको विषयमा अलि रचनात्मक हुनु पर्ने र महिलालाई तयार गर्ने कुरामा विचार गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस पुरुषको सेक्स सम्बन्धी दश गोप्य कुरा यस्ता छन् !
० आनन्द र सन्तुष्टिबीच फरक
० विस्तारै गरेको राम्रो
यौन क्रिडाका लागि हतारिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना संवेदनशील कोमल अंगमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेदनशील अंगसँग संवेदनशीलरुपमै प्रस्तुत भएको उनीहरु मन पराउँछन् ।
० वातावरणको भूमिका
अधिकांश महिलाले उपयुक्त मौषम वा वातावरण नबने यौन आनन्द लिन नसकिने बताए । चिसो मौषममा चिसा खुट्टा लिएर पुरुष यौन क्रिडा गर्न तयार भएपनि महिला त्यस्तो समयमा गाह्रो गाह्रो मान्ने गर्छन् । त्यसैगरी गर्मीमा सेक्सको चाहाना र आनन्द बढी हुने महिलाको अनुभव छ ।
० आसनको भूमिका
यौन क्रिडामा आसनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने महिलाको भनाइ छ । महिलाका अनुसार सुताएर उनीहरुको तल सिरानी राखेर यौन क्रिडा गर्दा महिलाले बढी सन्तुष्टी अनुभव गर्ने गर्छन् । तर सुतेका पुरुषमाथि चढेर यौन सम्पर्क गर्दा पनि मजा आउने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसै गरी अधिकांश महिलाले ‘डगी स्टाइल’ अर्थात महिलाले चार हात खुट्टा टेकेर बस्ने र पुरुषले पछाडीबाट यौन क्रिडा गर्ने आसन सबै भन्दा आनन्ददायी रहेको बताए ।
० विभिन्न तरिका
अष्ट्रेलियन सेक्स रिसर्चर जूलियट रिचटर्स भन्छन् सर्भेमा सहभागी पाँच जनामा एक महिला मात्र सामान्य तरिकाको सेक्सबाट चरम अवस्थामा पुगेका थिए । अधिकांश युवतीहरुले पुरुषहरुले हात र मुखको प्रयोग बढी गरेको राम्रो बताए । ९० प्रतिशत युवतीले पुरुषले मुखको प्रयोग गरेपछि मात्र चरम आनन्दमा पुग्ने बताएका थिए ।
० हतार नगर्नुस्
अधिकांश पुरुषहरु महिलाको भन्दा पनि आफ्नो सन्तुष्टीलाई बढी ध्यान दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त महिला तयार नै नहुँदै पुरुष स्खलित हुन्छन् । सर्भेक्षणका क्रममा अधिकांश माहिलाहरुले आफूहरु १० मिनेट भित्र चरम अवस्थामा पुग्ने तर पुरुष त्यतिन्जेल पनि हतारिने बताए ।
० संवेदनशील अंगको पहिचान
महिला शरीर आफैमा संवेदनशील चिज हो । तर पुरुषहरु आफ्नै जस्तो गरेर महिलासँग ब्यवहार गर्छन् । सेक्सको शोधका क्रममा महिलाहरु योनीको माथिल्लो भित्री भागमा हुने जी–स्पटमा स्पर्ष भए निक्कै छिटो आनन्दित हुने पत्ता लागेको छ । जी–स्पटमा चलाउँदा महिला तयार हुने र छिटो चरम सीमामा पुग्ने शोधकर्ताको भनाइ छ । यसका लागि औँलाको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।
० थाकेको बेला वा निद्रामा महिला उत्तेजित हुँदैनन्
पुरुषहरु अधिकांश समय यौनका लागि तयार रहेपनि महिलाको अलि फरक हुन्छ । उनीहरु थाकेको बेला वा निद्राको बेला उत्तेजित हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यस्तै उनीहरु थाकेको बेला यौन आनन्दमा पु¥याउँछु भन्नु पनि मुर्खता हुन्छ । एजेन्सी